Ndị ụlọọrụ ụgbọ elu Etiopia boro ebubo ibugara Eritria ngwa ọgụ megidere iwu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ndị ụlọọrụ ụgbọ elu Etiopia boro ebubo ibugara Eritria ngwa ọgụ megidere iwu
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • Akụkọ na -agbasa na Eritrea • Etiopia Na -agbasa Akụkọ • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ndị ụgbọ elu Etiopia boro ebubo ibubata ngwa agha na Eritrea n'ụzọ iwu na -akwadoghị
Ọ bụrụ eziokwu, ihe a na -ekwu bụ imebi iwu ụgbọ elu mba ụwa, nke machibidoro iji ụgbọ elu ndị nkịtị ebuga ngwa agha.
Nnyocha CNN na -ebo ebubo na ụgbọ elu Etiopia jiri ụgbọ elu ya bufee ngwa agha na Eritrea.
Ọ bụrụ eziokwu, asịrị a nwere ike itinye ndị otu ụgbọ elu Etiopia na Star Alliance na -enye ezigbo ego.
Ndị ụgbọ elu Etiopia na -ekwu na ọ "na -erube isi na ụkpụrụ niile metụtara ụgbọ elu mba, mpaghara na mba niile".
E boro onye na -ebu ọkọlọtọ Etiopia ebubo na akụkọ nyocha CNN ọhụrụ nke ibuga ngwa agha na -ezighi ezi site na Etiopia gaa Eritrea n'oge agha obodo na -awụfu ọbara na Tigray.
Nnyocha CNN zoro aka na '' akwụkwọ ibu na ihe ngosipụta '' yana '' akụkọ ndị ji anya ha hụ na ihe onyonyo foto '' nke gosipụtara na ebufere ngwa agha. Ụgbọ elu Etiopia ụgbọ elu n'etiti ọdụ ụgbọ elu mba ụwa na Addis Ababa na ọdụ ụgbọ elu Eritrea na Asmara na Massawa na Nọvemba 2020.
Mgbe a na -enyocha ụgwọ akwụkwọ, akwụkwọ akụkọ chọpụtara na “opekata mpe ugboro isii - site na Nọvemba 9 ruo Nọvemba 28 - Ụgbọ elu Etiopia kwụrụ ụgwọ ministri nchekwa Etiopia iri puku kwuru iri puku maka ngwa agha ka ebuga ya Eritrea. ”
Mpempe akwụkwọ ụgbọ elu, nke bụ akwụkwọ na-eso ngwongwo nke onye na-ebu ụgbọ elu mba ofesi na-ebu iji nye nkọwa zuru ezu banyere mbupu ahụ ma nye ya ohere ịdebe ya, gosipụtara na ngwa eburu gụnyere egbe, mgboagha, na ọbụna ụgbọ ala nwere ngwa agha pụrụ iche.
Usoro na ndebiri gụnyere "mejupụta ndị agha," "AM" maka mgboagha na "RIFFLES" (ezighi ezi nke egbe) pụtara na akwụkwọ mbata, dị ka nyocha CNN si kwuo, nke kwukwara ajụjụ ọnụ nke ndị ọrụ ụgbọ elu nke kwadoro okwu ndị ahụ.
Onye mbụ Ụgbọ elu Etiopia onye ọrụ ibu gwara ndị nyocha ahụ:
“Ụgbọ ala ndị ahụ bụ Toyota pickups nke nwere nguzo maka snipers. Onye njikwa ụlọ ọrụ ahụ kpọrọ m n'ime abalị wee gwa m ka m jikwa ibu ahụ. Ndị agha bịara n'elekere ise nke ụtụtụ ịmalite ibubata nnukwu gwongworo abụọ bujuru ngwa ọgụ na pikọp. Ekwesịrị m ịkwụsị ụgbọ elu m na -aga Brussels, a Boeing Ụgbọ elu 777, nke juru na okooko osisi, mgbe ahụ anyị wepụrụ ọkara nke ngwongwo ndị na -emebi emebi iji nweta ohere maka ngwa agha. ”
Ndị ụgbọ elu Etiopia agọnarị ihe ahụ merenụ, na -ekwupụta na ọ "na -agbaso ụkpụrụ niile metụtara ụgbọ elu mba, mpaghara na mba ụwa" yana "ka o siri mara ya na ndekọ ya, ọ buteghị ngwa agha ọ bụla n'ụzọ ọ bụla. nke ụgbọ elu ya. ”
Nkwupụta ọhụrụ a na -egosi nrịgo dị ịrịba ama azụ na nkwupụta ụgbọ elu gara aga na -agọnarị na ọ na -ebugharị ngwa agha ọ bụla n'oge esemokwu ahụ.
Ọ bụrụ eziokwu, nchoputa a na -ekwu bụ imebi iwu ụgbọ elu mba ụwa, nke machibidoro iji ụgbọ elu ndị nkịtị ebuga ngwa agha. Ọ nwekwara ike tinye ndị otu ụgbọ elu Etiopia na Star Alliance na -enye ezigbo ego, otu ndị ụgbọ elu ụwa iri abụọ na isii.
otu ekwu, sị:
October 8, 2021 na 12: 20
Nke ahụ abụghị eziokwu anyị ugbu a ihe niile bụ ndọrọndọrọ ọchịchị Etiopia ha nwere ụgbọ elu ndị agha nke mere eji eji ụgbọ elu ndị Etiopia nke a bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nwaa ihe ọzọ.